Gadood ka dhashay Nin Turki ah oo Isbitaal kuyaala Muqdisho ku dharbaaxay Gabar Somali ah | Radio Baidoa
Guriga Wararka Idaacada Gadood ka dhashay Nin Turki ah oo Isbitaal kuyaala Muqdisho ku dharbaaxay...
Gadood ka dhashay Nin Turki ah oo Isbitaal kuyaala Muqdisho ku dharbaaxay Gabar Somali ah
Waxaa Maanta Isbitaalka Deva ee Magaalada Muqdisho ka dhacay gadood ay sameeyeen Qaar kamid ah Shaqaalaha Soomaalida ah ee ka shaqeeya Isbitlkaasi, kadib markii nin kamid ah Shaqaaaha Turkiga ee kusugan Isbitaalka uu darbaaxay Gabar kalkaaliso ah.
Isbitaalka Deva oo ah Isbitaal gaar loo leeyahay oo casri ah dhawaana laga furay Magaalada Muqdisho waxaa maamula oo gacanta ku haya Hay’ado Turki ah, waxa uuna Isbitaalkan kuyaalaa Agagaarka Tarabuunka ee Degmada Hodan.
Goob jooge kusugan Isbitaalka Deva ayaa noo sheegay in saakay ay gadoodeen Shaqaalaha Soomaalida ah ee ka shaqeeya Isbitaalka gaar ahaan kuwa kalkaaliyaasha ah kadib markii mid kamid ah Shaqaalaha Turkiga uu candhuufay dharbaaxana ku dhuftay Gabar Soomaali ah oo Isbitaalka Kalkaaliso ka aheed.
Dhacdadan ayaa timid kadib markii Gabadha kalkaalisada ah ay daawo kadoontay Xafiiska uu ka shaqeeyo Ninkan turkiga ah, waxaana la tilmaamay in uu u diiday daawada xiligaa kadibna ay gabadha ku dacweysay maamulka Isbitaalka sidaana lagu canaantay Ninka Turkiga ah ee daawada diiday.
‘’ Ninka Turkiga ah marka ay gabadha ay dacweysay waa la canaantay , waxaana xiligaa kadib ninka Turkiga isaga oo careesan inta uu gabdha u tagay candhuuf ku tufay, waxaan dhacday in xitaa uu dharbaaxay sidaana ay meesha uga bilaabatay foodo iyo in a gadood sameeyeen Shaqaalaha Soomaalida ah ee Isbitaalka ku sugnaa ’’ Ayuu yiri Goob jooge kusugnaa Isbitaalka Deva xiliga uu falku dhacayay.
Hay’adaha iyo Dadka kale ee ajaaniibta ah ee kusugan Magaalada Muqdisho ayaa mararka qaar waxa ay tacadiyo kula dhaqaaqaan Shaqaalaha Soomaalida ah ee la shaqeeya, waxaana mar sii horeesay Garoonka Aadan Cadde nin Ajnabi ah oo kamid ahaa Shaqaalahii Shirkada SKA uu feer ku dilay Nin Soomaali ah.